Sida Video-ga loo qaybiyo dhawr qaybood:Barnaamijyo kala duwan iyo cashar gaaban | Hal-abuurka khadka tooska ah
Maalin kasta shaqada tafatirka fiidiyaha ayaa sii kordheysa baahida istuudiyaha naqshadeynta. Taasi waa sababta, qoraalkan, Waxaan abuurnay hage haddii aadan weli khabiir ku ahayn qaybta maqalka iyo muuqaalka, halkaas oo aan ku bari doono cashar gaaban oo aad u kala qaybin karto muuqaal qaybo kala duwan.
Waa hawl, hadda, mashruucyo badan oo tafatir ah, si joogto ah looga shaqeeyay tan iyo markii ay ku saleysan tahay inay aad muhiim ugu tahay mashaariicda u dhexeeya filimada, blogyada internetka, meelaha xayeysiinta, casharrada fiidiyowga ee mawduuc gaar ah, iwm.
1 Tafatirka fiidiyowga
2 Muuqaalka u kala qaybi dhawr qaybood
2.1 Tallaabo 1: Ku rakib barnaamijka
2.2 Tallaabada 2: Dooro fiidiyowga
2.3 Talaabada 3. jar muuqaalka oo ka saar qaybaha
2.4 Tallaabada 4. Badbaadiso fiidiyowyada la tafatiray
3 Barnaamijyada kale
3.3 DaVinci Resolve
Tafatirka fiidyaha waxaa lagu qeexaa sida hab uu tafatirehu uga sameeyo muuqaal fiidiyoowyo badan, sawiro, cinwaano iyo codad ama muusig.
Inta lagu jiro tafatirka fiidyaha, dhammaan agabka maqalka ah, sawirrada, animations, iyo qaab kasta oo muuqaal ah ayaa la ururiyaa, waxaana lagu qasaa codka si ugu dambeyntii loo soo saaro hal fiidiyow oo ay ku jiraan dhammaan waxyaabaha ku jira.
Waxaa jira barnaamijyo badan oo ka caawiya habka tafatirka fiidiyoowga iyadoo ay ugu wacan tahay tirada iyo saameynta kala duwan ee ay ku jiraan.
Muuqaalka u kala qaybi dhawr qaybood
Qeybtaan qoraalka ah, waxaan ku sharixi doonaa habka ugu fudud uguna dhaqsiyaha badan sida loo qeybsado muuqaalada. Si aad u bilowdo, waxaa muhiim ah in lagu rakibay codsiga Movavi. Movavi waa tifaftire fiidiyoow ah oo noo ogolaanaya inaan u maamulno muuqaal siyaabo kala duwan Thanks to qalabka ay bixiso.
Tallaabo 1: Ku rakib barnaamijka
Kahor intaadan bilaabin waxaa muhiim ah inaad soo dejiso tifaftiraha fiidiyowga. Orod faylka dejinta oo rakib barnaamijka adiga oo raacaya tilmaamaha ka soo muuqan doona shaashadda marka aad rakibto. Movavi Video Editor Plus waxa ay leedahay interface dareen leh oo fudud, shan daqiiqo gudahood waxaad ku ogaan doontaa sida loo isticmaalo barnaamijka. Waxaad u isticmaali kartaa software-kan inaad kala qaybiso oo aad ku biirto fiidiyowyada, ama aad sameyso hawlo kale oo tafatir ah.
Tallaabada 2: Dooro fiidiyowga
Guji Kudar faylasha oo dooro fiidiyowga aad rabto inaad ku darto qoraal-hoosaadyo. Fiidiyowgu wuxuu ka soo muuqan doonaa Keydka Warbaahinta. Dabadeed jiid clip-ka oo ku rid Jadwalka wakhtiga.
Talaabada 3. jar muuqaalka oo ka saar qaybaha
Si aan muuqaalka u kala qaybiyo laba qaybood. marka hore guji waqtiga oo u dhaqaaq calaamadeeyaha gaduudka barta fiidyowga meesha aad rabto inaad gooyso. Waxa kale oo aad heli kartaa qayb gaar ah oo ka mid ah fiidyaha adiga oo ku ciyaaraya daaqada horudhaca. Kadibna ku dhufo astaanta maqaska muqaalkana waxa loo qaybin doonaa laba qaybood.
Si loo gooyo jajab fiidyow ah oo aan loo baahnayn, dhig calaamadeeyaha cas bilowga goobta aan la rabin oo dhagsii astaanta maqaska. Ka dib u dhaqaaq calaamadeeyaha cas ilaa dhamaadka qaybta aan la rabin oo kala qaybso clip-ka mar kale. Hadda qaybtan waxay si buuxda uga go'i doontaa inta kale ee muuqaalka iyo waxa hadhay oo dhan in la sameeyo waa in la tirtiro adigoo gujinaya Delete.
Tallaabada 4. Badbaadiso fiidiyowyada la tafatiray
Guji Dhoofinta oo dooro qaabka fiidyahaaga ku yaal tabsyada dhanka bidix ee daaqada pop-upka. Waxaad dooran kartaa qaab kasta oo muuqaal ah, sida AVI, MPG, 3GP, MKV, WMV, MP4, FLV ama MOV, oo sidoo kale u kaydso faylkaaga sida fiidiyow HD ah. Marka xigta, tilmaan galka meesha aad ku sugan tahay ee Save in field oo guji Start.
Clipchamp waa daabace, Converter video iyo kombaresarada, Dhammaantood waa mid, kaas oo sidoo kale leh kamarad webka iyo duubista shaashadda, abuuraha xayeysiiska ee Facebook iyo xalalka kala duwan ee soo dejinta, laga bilaabo fiidiyowyada kanaalkaaga YouTube ama Vimeo, fiidiyowyada xayeysiiska ee Instagram.
Waxay kuu ogolaanaysaa inaad beddesho qaabka faylalka browserka oo aad si toos ah ugu kaydiso kombiyuutarkaaga. Kuma jiraan wax soo dejineed ama rarid faylal. Tani waxay ilaalinaysaa sirtaada oo waxay hubisaa in faylashaada aan weligood lala wadaagin cid saddexaad ilaa aad doorato inaad sidaas samayso. Intaa waxaa dheer, waxaad badbaadinaysaa bandwidth iyo wakhtiga uploaded. Waxaad sidoo kale ku dhoofin kartaa go'aammo kala duwan.
Xigasho: Kooxda Miranda
Corel waa tafatire fiidiyoow ah oo dareen leh oo loogu talagalay xirfadlayaasha, kaas oo ka kooban tiro badan oo saameyn iyo qalab ah si loo kobciyo wax soo saarkaaga.
Waxaa ka mid ah hawlaheeda. waxaan muujineynaa jarista iyo tafatirka, saameynta muuqaalka sare leh, duubista shaashadda, fiidiyowyada isdhexgalka, qaababka iyo qalabyada dareenka leh kuwaas oo kuu ogolaanaya inaad wax kasta ka abuurto filimada ilaa fiidiyoowyo fudud ama animations iyo suurtogalnimada in lagu daro tifaftiraha sawirka sare leh ee laga heli karo isla goobta.
DaVinci waa codsi tafatir muuqaal ah aan toos ahayn, inkastoo isticmaalkeeda ugu weyn uu yahay sixitaanka midabka. Waxay leedahay dhowr qaybood, mid kasta oo leh qalab gaar ah iyo goobo shaqo oo heer gaar ah: tafatirka fiidiyowga, hagaajinta midabka, isku dhafka dhawaaqa / maqalka iyo saamaynta muuqaalka, warbaahinta iyo bixinta wax kasta oo aad u baahan tahay inaad soo dejiso, abaabulo oo aad bixiso mashaariicda.
Waxay leedahay interface aad u fudud in la isticmaalo, oo ku habboon bilowgayaasha, laakiin sidoo kale waa u dhammaystiran tahay xirfadlayaasha.
Final Cut waxa uu noqday mid ka mid ah barnaamijyada hormuudka ka ah xagga tafatirka muuqaal xirfadeed. Software-kan Apple wuxuu u oggolaanayaa dadka isticmaala inay duubaan oo ay u gudbiyaan fiidiyowyada gudaha ama dibadda, halkaas oo la tafatirin karo, laga baaraandegi karo, loona dhoofin karo qaabab kala duwan oo kala duwan.
Its interface fudud waxa uu leeyahay afar daaqadaha ka kaas oo aad ka raadin kartaa, view, abaabulo iyo edit clips kala duwan oo u jiidi kartaa in timeline. Waxaa ku jira kala-guurka, fiidiyoowga iyo filtarrada maqalka, iyo sixitaanka midabka.
FlexClip waa tifaftire fiidiyoow khadka tooska ah oo fudud kaas oo kuu ogolaanaya inaad ku abuurto nooc kasta oo fiidiyoow ah daqiiqado laga bilaabo qaabab hore loo qorsheeyay ama xoqan: shabakad kasta oo bulsheed, wargeysyada, shirkadaha, isu imaatinka qoyska, safarada, iyo kuwo kale oo badan. Waxay leedahay maktabad warbaahineed oo ballaaran oo sawiro kayd ah, muuqaalo royalty-free iyo muusig ah.
Waxaa ka mid ah hawlaha ay ka mid tahay goynta, saamaynta maqalka iyo muuqaalka, cod-dhaafka iyo watermark. Waxa kale oo aad ku dari kartaa walxaha firfircoon sida qoraal firfircoon, dulsaar, widgets, logos, memes, gifs, iwm. Waxa ay taageertaa duubaha screen iyo video Converter.
Waa barnaamij kale oo bilaash ah oo Apple ah, oo ku habboon macOS iyo macOS, kaas oo aad si fudud ugu abuuri karto fiidiyowyo natiijooyin fiican leh. Qalabku waxa kale oo uu kaa caawinayaa in aad samaysato raad-raacyo wax-soo-saarkaaga.
Habka abuurista waa mid aad u fudud: dooro fiidiyowyada iyo sawirrada aad rabto inaad isticmaasho, ku dar cinwaanno, muusig iyo saamaynta dhawaaqa (waxaa ku jira in ka badan 80 cod-dhaqaale), samee cod-bixinno, ka dooro 13-ka fiidiyooga fiidiyooga ah oo la wadaag qof kasta oo aad rabto goob kasta . Waxaad samayn kartaa abuuristaada ka qalab kasta oo Apple aad leedahay oo la furo mashruuca la Cut Final sidoo kale.
Inshot waa a App-ka mobilada ee wax ka beddelka sawir iyo muqaal aad u fudud in la isticmaalo, bilaash ah oo la socon kara Android iyo iOS.
App-kan waxaad ku jari kartaa, wax ka beddeli kartaa oo dib u taabsiin kartaa sawirrada iyo fiidyaha, si degdeg ah oo fudud. Astaamaha Fiidiyowga waxaa ka mid ah: qoraalka, filtarrada, jar, kala qaybinta, nuqul ka sameysan, rogrogid, qaboojin qayb ka mid ah clip-ka, ku dar ama wax ka beddel asalka, wax ka beddel xawaaraha maqalka iyo mugga, cadaadiso oo beddel fiidiyowyada, isku darka clips badan oo mid ah, iyo dhoofinta iyada oo aan tayada lumin inaad ku wadaagto Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube ama TikTok hal gujin oo keliya.
Waa bilaash, laakiin haddii aan dhoofinno muuqaal, calaamad-biyood leh summada InShot si toos ah ayaa loo soo saari doonaa. Haddii aad rabto inaad ka hortagto inuu soo muuqdo, waa inaad bixisaa kharashkiisa oo buuxa, kaas oo sidoo kale siinaya helitaanka astaamo horumarsan.
Kdenlive maaha mid ka mid ah tafatirayaasha fiidyaha ee ugu caansan, laakiin waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee bilaashka ah taasna waxaan u aragnaa inay mudan tahay in la xuso. Waa Isha Furan ee software tafatirka fiidiyaha aan tooska ahayn, taas oo ah, il furan oo ku salaysan Qaab-dhismeedka MLT, kaas oo markii hore loo maleeyay Linux 2003.
Hadda waa la jaan qaada Mac OS iyo Windows oo waxay bixisaa taageero dhammaan qaabab. Waxay ka kooban tahay jadwal leh raadad maqal iyo muuqaal ah oo badan, qaab la beddeli karo, iyo saamaynta dhawaaqa aasaasiga ah iyo kala-guurka.
Tifaftirahan waxaad si toos ah u maarayn kartaa qaab kasta oo maqal ama muuqaal ah, adoon u baahnayn inaad beddesho ama dib-u-dejiso cajaladahaaga ama jajabyadaada. Intaa waxaa dheer, waxay kuu ogolaaneysaa inaad isticmaasho oo aad habayso kanaalo badan oo muuqaal iyo maqal ah, mid walbana waa la xannibi karaa ama la dami karaa iyadoo ku xiran baahidaada.
Wuxuu si toos ah u abuuraa nuqullo-res-hooseeya oo il-goobyada si uu kuugu ogolaado inaad wax ka beddesho kombiyuutar kasta, iyo ka dib dhoofinta u samaynta xal sare.
Waxaa jira barnaamijyo badan oo tafatirka ah oo la sameeyay iyadoo ujeedadu tahay in hawsha aad loo fududeeyo. Taasi waa sababta aan rajaynayno inaan kaa caawinnay raadinta barnaamijyadan iyo hagaha yar ee aan ku siinnay.
Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad isku daydo inaad soo dejiso qaar ka mid ah barnaamijyada oo aad bilawdo tacaburka sida tafatire muuqaal ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sida loo qaybiyo muuqaalka dhawr qaybood